1 KAPETROS 1 - IsiXhosa 1996 (XHO96) - BibleSA
1 KAPETROS 11 KAPETROS 1
11Kubhala mna Petros, *umthunywa kaYesu Krestu. Ndibhalela nina bantu bayimilowo yakwaThixo eniziimbacu ezithe saa kumaphondo asePonto, eGalati, eKapadoki, eAsiya, naseBhitini. 2Nakhethwa kwangaphambili ngokwentando kaThixo, nenziwa imilowo ngoMoya oyiNgcwele, ukuze nilulamele uYesu, nitshizwe ngegazi lakhe. Nanga ke ningenzelwa isisa niphiwe uxolo ngakumbi nangakumbi.
3Makabongwe uThixo noYise weNkosi yethu uYesu Krestu, othe ngenceba wasinika ubomi obutsha ngokuvusa uYesu Krestu ekufeni! 4Kungenxa yaloo nto ke sinethemba elingagungqiyo nje, sihleli silinde ilifa leentsikelelo asigcinele zona uThixo. Azinakubola ezo ntsikelelo, azinakonakala, azinako nokutshitsha. 5Wonilondoloza uThixo ngamandla akhe, ngenxa yokholo eninalo, kude kufike loo nkululeko beniyilungiselelwe.
6Ngenxa yaloo nto ke vuyani, naxa phofu okwangoku ninyanzelekile ukuba nibe lusizi ngenxa yeentlupheko enizithweleyo. 7Ezo ntlupheko zicikida ukholo lwenu, lucace into oluyiyo. Negolide le iyinto etshabalalayo, iyacikidwa ngomlilo. Nalo ke ukholo lwenu oluxabiseke ngaphezu kwegolide lumelwe kukucikidwa, ukuze nibe nodumo, kwakunye newonga nesidima ngemini yokufika kukaYesu Krestu. 8Anikamboni nokumbona, kodwa niyamthanda. Niyakholwa nokukholwa kuye, naxa ningekamboni nje. Senizele naluchulumacho olungenakuchazwa, 9kuba seniyibona injongo yokholo lwenu; ndixela inkululeko yenu.
10Yile nkululeko kanye le babephengulula beyiphanda kunene *abashumayeli bamandulo. 11Babethetha ngesisa eniya kusenzelwa nguThixo. Babezama ukuphonononga ukuba zaziya kuhla nini na, njani na, ezo zigigaba. Kaloku uMoya kaKrestu wabatyhilela intlungu eyayiza kuhlela uKrestu ngeli thuba, newonga awayeza kulixhamla. 12Batyhilelwa ukuba ezo ndaba babezithetha ngezinto ngezinto, yayingezozabo, yayizezenu. Ezo ndaba ke zezi nizixelelwa ngabo bazivakalisayo kuni ngoku iindaba ezimnandi ngamandla kaMoya oyiNgcwele owavela ezulwini. Nditsho nkqu nezithunywa zezulu ziyakunqwenela ukuziqonda ezo zinto.
Ziphatheni ngokwemilowo yakwaThixo
13Ngako ke finyezani umbhinqo, nibaze iingqondo, ningathembi nanye into ngaphandle kwesisa seentsikelelo eziza kuza noYesu ukufika kwakhe. 14Ziqheliseni ukululama, ningaziphathi ngendlela ebeniziphethe ngayo ngokuya beningekazi nto ngokholo. 15Kwinto yonke yibani ngcwele. Kaloku uThixo onibizileyo ungcwele. 16Kanti ke *neziBhalo zitsho ukuthi: “Yibani ngcwele, ngokuba mna ndingcwele.”Nqulo 11:44-45; 19:2
17Xa nimnqula nithi uThixo nguBawo ongenamkhethe, ogweba lowo nalowo ngokwezenzo zakhe. Ngoko ke mnikeni imbeko lo gama nisesemhlabeni. 18Khumbulani ixabiso enakhululwa ngalo kwintlalo ebingento yookhokho benu. Anihlawulelwanga nganto itshitshayo, ifana nesiliva negolide. 19Nahlawulelwa ngegazi elixabisekileyo leXhwane elinguKrestu ongenasisihla nasiphako. 20Wanyulwa nguThixo, lingekadalwa ihlabathi, wabonakala ngenxa yenu kule mihla yokugqibela. 21Ke ngoku niyakholwa kuThixo ngenxa yakhe. Ke uThixo wamvusa ekufeni, wamnika iwonga, ukuze nijonge kuThixo ngethemba nangokholo.
22Njengoko ke nithe ngenxa yokululamela inyaniso nenziwa nyulu ukuze nithandane ngokwabazalanayo, thandanani ke ngoko ngokungazenzisiyo. 23Kaloku nizelwe ngelizwi likaThixo ophilayo, ongunaphakade, naba ngabantwana balowo ungasoze afe. 24Zitsho neziBhalo ukuthi:
nodumo lwakhe lunjengentyatyambo yengca.
Iyabuna ingca, ivuthuluke intyatyambo,
25kodwa lona ilizwi leNkosi lihlala lihleli.”Isaya 40:6-8
Elo lizwi ke lelo nalishunyayezwa ngeendaba ezimnandi.